RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii November ee Premier League oo la shaaciyey – Gool FM
(England) 13 Dis 2019. Waxaa lagu dhawaaqay xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii November ee horyaalka Premier League.
Xiddiga kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa ku guulaystay laacibkii ugu fiicnaa bishii November ee horyaalka Premier League dalka England kaddib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay.
Sadio Mane ayaa dhaliyay bishii lasoo dhaafay ee November 3 gool, wuxuuna sidoo kale dhiibay 1 gool, taasoo ka caawisay in Liverpool ay guul gaarto dhamaan afartii kulan ay ciyaartay isla markaana ay 8 dhibcood ku qabato hoggaanka horyaalka Premier League.
Waa markii saddexaad ee 27 jirkan uu ku guuleysto abaal-marintan, isagoo horey ugu guuleystay bishii August 2017 iyo bishii March ee sanadkan.
Xiddiga reer Senegal ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay abaal-marintan musharaxiin ka kooban toddobo ciyaaryahan ay ku jiraan Dele Alli, Raul Jimenez, Lys Mousset, Son Heung-min, Caglar Soyuncu iyo ku guuleystaha abaal-marintan bishii October ee Jamie Vardy.